IPad Mini cusub, mini -ga Apple wuxuu noqonayaa Pro | Wararka IPhone
IPad Mini -ga cusub, mini -ga Apple wuxuu maraa Pro
Kariim Hmeidan | 15/09/2021 21:00 | iPad
Shalay Apple waxay qabatay Keynote bishii Sebtember 2021. Keynote oo had iyo jeer diirada saaraya furitaanka iPhone iyo Apple Watch waana sida loo fuliyay. Nooc cusub oo ah iPhone 13, iyo taxanaha Apple Watch Series 7 ee la filayo ayaa xoogaa ka caaggan in aysan keenin naqshad cusub. Laakiin Apple sidoo kale waxay rabtay inay nagu yaabiso wax kale: iPad Mini cusub. IPad cusub oo cabbirkiisu yar yahay oo helaya naqshadda beddelka cusub ee iPad -yada ee kala duwan Pro. Sii wad akhriska aan kuu sheegeyno dhammaan faahfaahinta ...
Sidaad ku arki karto sawirkii hore, iPad Mini wuxuu ku soo noqdaa warkeenna wuxuuna u sameeyaa sida ugu wanaagsan. Marar badan waxaan ka soo hadalnay sida uu iPad Mini u yahay mid aad u kala duwan, ipad -ka ugu fiican ee lagu qaado maalinteena maalinka ah iyo gaar ahaan la jaanqaadka qalinka Apple. Apple waxay noo keentay wixii aan rabnay: Apple Mini oo leh naqshadda iPad Pro, naqshad ay mar horeba lahayd iPad Air -kii ugu dambeeyay, oo hadda ku imanaya nooca la yareeyay (iyo midka iPad -ka ah).
Shaashad gees-ilaa-gees leh oo leh geesaha dhuuban iyo geesaha wareegsan, 8,3 inji. Dhammaanteed waxaa ilaalinaya 100% dib -u -warshadaynta aluminium oo laga heli karo Space Gray, Pink, Purple, ama Star White. Shaashadda (500 nits) waxay sii socotaa teknolojiyadda Tone True iyo a gamut midab ballaadhan oo yaraynaya milicsiga oo noo oggolaanaya inaan yeelano midabyo muuqda iyo qoraallo fiiqan.
Oo haddii iPad Mini -kii hore uu la jaanqaaday jiilkii kowaad ee Qalinkii Apple, markan Apple wuxuu ka dhigayaa mid la jaan qaada jiilka labaad ee Apple Pencil (si gooni ah loogu iibiyey € 135), Qalin kaas oo si magnetic ah ugu dhejinaya dhinaca iPad Mini oo xitaa lacag la'aan ku dallaca.
Iyagoo raacaya xiisaha Apple ee amniga, kiiskan waxay raacayaan raadkii iPad Air -kii ugu dambeeyay iyo ku dar Aqoonsiga taabashada badhanka kore ee iPad Mini. Aqoonsi taabasho ah oo dad badani rabaan inay ku arkaan iPhone -ka laakiin waxay umuuqataa inaysan waligeed soo afjarin imaanshaha. Adiguna, ma waxaad ka doorbideysaa Aqoonsiga Taabashada in lagu aqoonsado Face ID?
Hagaag, waxaan wajahaynaa iPad Mini oo leh xaddidaadyo ay tani keenayso, runtu waxay tahay in Apple ay rabtay inay kaararkeeda miiska saarto oo ay iPad Mini gaarsiisay heer sare. Sida iska cad kuma jirto processor -ka M1 ee iPad Pro, laakiin iPad -kan cusub ee cusub waxaan ku leenahay A15 Bionic cusub, oo ah processor kaas oo jidka ku sii fidi doona iPhone 13 iyo 13 Pro. Hal Six-core CPU oo ballanqaadaya inay 40% dhakhso u noqon doonto iyo inay xitaa isaga yeelan doonto Apple ee Neural Engine kaas oo wanaajin doona xawaaraha socodka qaarkood. Jid ahaan, sida laga soo xigtay Apple, iPad Mini wuxuu leeyahay a GPU-shan-core, oo ku habboon socodsiinta cayaaraha ugu fiican, ama u qaadista xadka codsiyada naqshadeynta.
El USB-C waxay ka muuqataa muuqaalkeeda xiddigga ah ee iPad Mini-kan oo ah dekedda keliya, ayaa noo oggolaan doonta inaan lacag ka qaadno ama xitaa aan isticmaalno qalab kasta oo ku habboon USB-C (xitaa waddooyinka adag ee dibadda). Marka laga hadlayo isku xirnaanta, Apple waxay rabtay inay iPad Mini gaarsiiso heerka cusub ee iPhone 13: Isku xirka 5G iyo jiilka 6aad Wi-Fi, iskuxirrada ugu dhaqsaha badan suuqa.
Wax badan diiradda saari maayo sifooyinka kaamerada, Waligay uma doodi jirin kamaradaha iPad -yadaInkastoo aad la yaabi lahayd inta qof ee iPad -kooda u adeegsada kaamirooyinka waaweyn. Waa wax la yaab leh isbeddelka kamaradda hore ee gaadhaysa 12 megapixels oo leh xagal aad u ballaadhan, iyo sida aan ku aragnay iPad -yada kale waxaan yeelan doonaa qaab -dhismeedka udub -dhexaadka ah oo noo oggolaan doona inaan hagaajino wicitaannada fiidiyahayaga. Kaameeraha dambe ayaa sidoo kale ku hagaajiya xagal ballaadhan oo xoogaa hagaajin doona sawirradayada iyo xitaa dukumiintiyada iskaan.
IPad Mini oo aan mar hore ku keydsan karno mareegaha Apple iyo inaan awoodno hel Jimcaha soo socda, September 24. Dhammaan qiimaha 549 64 ee ikhtiyaarkiisa ugu raqiisan (XNUMX GB ee nooca Wifi), ilaa € 889 qiimaheeda ugu sarreeya (256 GB oo ku jira nooca Wifi + 5G). Ikhtiyaar weyn oo lagu xisaabtamayo haddii aad danaynayso aalad aad u badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » IPad Mini -ga cusub, mini -ga Apple wuxuu maraa Pro
Maya, iPhone 13 kuma muujiyo boqolkiiba batteriga baarka xaaladda
Fiilada degdegga ah ee fiilada USB C waxay ku timaaddaa Apple Watch cusub